Ahụike Uche Bromley - Bromley, Lewisham & Mindwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Ahụike Uche Bromley
Bromley, Lewisham & Greenwich Mind na-enye ọtụtụ ọgụgụ isi na ọrụ mgbaka iji nyere ndị bi na Bromley aka ilekọta ma melite ahụike na ahụike ha.
Ọrụ mgbake na-enye ohere dị iche iche iji nyere ndị okenye aka mgbake site na nsogbu ahụike uche, na-enyere ha aka ịchịkwa na iwulite ndụ bara uru na afọ ojuju.
Nwee anụrị, mụta ihe ọhụrụ ma ọ bụ nwee ahụ iru ala mgbe ị na-enyocha ma na-akwalite ahụike uche gị site na usoro ọmụmụ ihe na-atọ ụtọ nke Bromley Recovery College. Ọhụrụ anyị Summer 2022 prospectus bụ ugbu a!
Ọgbọ Nkwado iche iche
Ọrụ maka ndị okenye nwere ahụmịhe metụtara ahụike ọgụgụ isi na-achọ ịkwado ma na-akwado ndị nwere ahụmịhe nwere mmekọrịta.
Bromley Ọgbọ Nkwado Enyi na-enye ndị otu onye ahụ ike uche na-eme ka ịnweta obodo ha siri ike.
Bromley Well na-enye ọtụtụ ọrụ iji kwado ndị okenye na ihe ịrịba ama mbụ nke nsogbu uche, nke anụ ahụ ma ọ bụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji nọrọ nke ọma ma nọrọ onwe ya.
Nkwado maka ndị were gị n'ọrụ bụ ọrụ ọrụ na - akwụghị ụgwọ na - enyere ndị otu nọ na Bromley aka ma gafee London ịme mgbanwe dị mma na usoro mbanye ha.
Ndi otu umuaka nke nwere uche na-enyere ndi nwanyi aka lebara anya nke uche ha n'oge ime ime na afo mbu nke omumu.
Nkwado Obodo Perinatal
Na Perinatal Community Support Service na-akwado ndị nne ka ha bụrụ na ndị nne ọhụrụ nwere ike, ma ọ bụ na-enwe, nsogbu n'oge oge ọ bụla.